Miarahaba, izaho dia te-hahafantatra avy aminao izay, ao ny hevitrao, ny tsara indrindra ny fifandraisana amin’ny vehivavy ny taona. Miarahaba ny Vehivavy dia tsy voatery ho mora. Misy fomba maro mba hihaona ny vehivavy. Tsara tarehy biby Fiompy dia tena marani-tsaina, nefa koa ny asa kitapo. Vehivavy, tahaka ny lehilahy, ihany koa ny omby ny biby. Misy olona maro izay hitsara anao. Ianao koa dia tokony hanome ny namana tsara hanandrana. Ny fikambanana ary ny fikambanana dia foana ny hevitra tsara ny mahazo ny mahalala olona. Arakaraka Ny safidinao, ny Fikambanana dia tokony ho marina. Na iza na iza te-handeha any amin’ny dihy tokony hanao izany satria izy ireo dia mampihomehy, tsy noho ny vehivavy. Satria afaka manova haingana ny mifanohitra vokany toy izany no natao. Tokony hahatakatra ny zavatra tena tia manao, ary noho izany dia tokony alaivo sary an-tsaina ny fanontaniana raha toa ka vehivavy ny manao koa mampihomehy. Satria afa-tsy ireo izay mamindra amin’ny toy izany koa halavan’ny onjam dia manana fandraisana. Ho an’ny Aterineto ny vavahadin-tserasera, dia araka ireo tombontsoa no resahina, fa izy rehetra ihany koa ny kely be dia be ny saina. Olona iray no tena tsara mba mety hihaona ny voafidy (ho an’ny simia). Koa ny mahagaga dia ny omby toe-tsaina, izay manana ny anjara toerany lehibe. Tsy maintsy miandry misy, ny antsoina hoe white knight dia hita ao amin’ny vondrona ny namana, sy ny malala dia tsy misy, vao mahafantatra ny tsirairay. Ny tsara indrindra dia ny mifangaro, ny vintana mba hiraoka ahitra. Avy eo dia miala ny tokan-tena fitsangatsanganana, antoko tokan-tena, ny fikambanana ny mpikambana ny safidy, ny Internet, na fotsiny ao an-namana, na orinasa iray fitsangatsanganana mba hanandrana izany. Na izany aza, zavatra iray dia foana ny tena zava-dehibe (teny tamin’ny fotoana sasany, efa mikopaka hilavo lefona), aza manary ny basy any amin’ny vary sy mba hamoahana ny rano indray mitete teo amin’ny vato. Raha izany, dia amin’ny fomba iray na hafa izany niara-niasa, dia tokony ho famantarana ny vehivavy iray, ny saina, ny herim-po (tsara ny hariva, dia ny fitiavana avereno izany, fa tsy maintsy. Aho dia milaza fotsiny fa dia mahafinaritra ny hariva sy ny manokana ny fahatsapana. Mihazakazaka manaraka ny vehivavy dia tsy mba toy izany ny mahasoa sy ny haingana afaka manompo toy ny Tsara-nitranga. Tony sy malemy fanahy. Tsy manao izany ka ho ahy manokana, tiako ianao fa ho faty taona lasa izay noho ny zavatra tsy manam-potoana ho an’ny. Raha izany no izy, indraindray dia afaka miteny hoe»Eny»mba ho afaka ny handeha, ary ianareo tia azy, na hanontany ahoana no zavatra handeha miaraka aminareo. Raha manao izany ianao dia efa mandray anjara amin’ny fifanakalozan-kevitra. Manao izany nandritra ny andro vitsivitsy. Raha ny rivotra dia tsara, mangataka indray, fa raha toa ka te-hihaona aminao. Fa izy tsy dia mandeha any amin’ny sarimihetsika.
Satria ianao mianatra ny hahalala ny tsara. Fomba iray na hafa, dia. Miezaka fotsiny. Noho izany dia nandeha irery. Ka ny fivoriana fotsiny ny mandeha any amin’ny Valan-javaboary. Tamin’ny voalohany dia tsy misy afa-tsy kely iray, fa na izany na tsy izany dia foana nahita fomba mba mihinjitra avy. Amin’ny farany, dia tonga ny andro sy ny alina sy ny kilaometatra. Izany no be dia be ny voly. Ny tena nahatohina ahy dia ity ny fitiavana izay dia nikarakara ahy foana nanontany aho raha tsara rehetra sy mihinana amiko. Mety ho toa toy ny hafahafa ny ora, fa efa fantatra ny hafa nandritra ny fotoana tena ela, ary izy tsy nanao izany ho azy. Izy tsy dia nanaiky ny Mofomamy avy amiko. Eo amin’ny fiaran-dalamby, dia ninia nijery ny N er, nangataka izy, ohatra, raha nipetraka teo akaikiko eo amin’ny seza. Nandritra ny diabe, niresaka betsaka momba ny fianakaviana. Ny ankamaroantsika dia niresaka momba ny fitiavana, fifandraisana, ary ny ankizy. Nanontany ahy izy, ohatra, ahoana no aho no mamela ny ankizy hieritreritra sy ny fomba azoko sary an-tsaina ny mety tsara mpiara-miasa. Mandritra izany fotoana izany, nilaza izy fa mbola tsy manana ny vadiny, izay nihaona taminy izy, izany tour dia ny fahombiazana, ary nalainy intsony ny hat. Nilaza izy fa isika dia manana fahafahana hitsidika mahaliana kokoa toerana. Ny drafitra, ny roa taona manaraka dia afaka ny ho feno. Fa avy eo dia nisy zavatra hafahafa nitranga. Nanontany ahy izy raha liana ary raha afaka mahazo ny mahafantatra anao avy aminy. ny fahamendrehana dia mendrika. Hoy aho hoe tsia, ary hoy izy, fa na izaho, na ny tanora, na maizina ireo. Fotoana iray hafa, dia nanontany ahy hoe inona ny fianakaviana dia mihevitra fa raha ny roa antsika namakivaky ny faritra irery amin’ny alina. Izaho raiki-trosa ny fianakaviana ny mpitsabo nify izay eto amin’izao fotoana izao toy ny hoe ao amin’ny habakabaka. Raha ny marina, dia tia ny fianakaviany, ary izy foana baiko ny tsara tarehy Greg ary manontany tena hoe ahoana no zava-mitranga. Amin’ny faran’ny ny fitsangantsanganana, tsaroako fa efa nilaza izany indray mandeha ny volana maro lasa izay, miaraka amin’ny izay azo atao Nihanika mpiara-miasa. Jereo ny raha misy misy tombontsoa. Nanana azy ka mandraka androany, fa adinoko. Afaka manampy ahy, ary tsy afaka hilaza amiko, satria izay no mitondra tena izy mahagaga. Satria ianao handeha hiaraka amiko, any filasiana, hitady ny»N»ary avy eo dia milaza zavatra toy izany. Tena tsy azoko. Masìna ianao, miala tsiny lava lahatsoratra, ary misaotra anareo noho ny famakiana izany. Miarahaba, izaho dia tovolahy feno taona. Efa nanana be dia be ny zavatra niainany sy ny fifandraisana amin’ny vehivavy ny taona. Efa nisy ny fandraisana ny tena Matotra ny vehivavy ho herintaona izao. Izany no ara-dalàna. Aho, tsara tarehy ary angamba efa manana be dia be ny tao an-tsaiko Eny, fa tsy raharahako intsony, satria tsy ho ela aho dia ho amin’ny fialan-tsasatra amin’ny raiko aho, dia te hanontany anareo hoe aiza, ahoana ary rehefa fantatro ny FANOHERANA ny fungal Hadesy tovovavy tsara kokoa. Noho izany aho-pahaizana licence indray, mazava ho azy, mihantona avy sy ny fianarana momba ny vehivavy, fa tsy ny mora, tanàna, na mandrakizay, satria aho tena lehibe sy marin-toerana. tsara, fa tsy toy ny andro firavoravoana ho an’ny maso, rehefa hitany sy hitany, aho santimetatra ny haavony, ary satria manantena aho toy ny helo ho an’ny vehivavy ny kely dia kely, fa sarotra eto an-RLP. Izay, toy ny ao amin’ny OLONA, ianao manana ny fahafahana lehibe indrindra hihaona olona iray avy ny fampiharana. Izay afaka hihaona ny tsara indrindra ho an’ny vehivavy iray alina ny fahalalana. Ny valiny»poof». Fa efa antitra sy tsy misy intsony ny fahafinaretana. Miarahaba, noho izany aho omaly sy ny afak’omaly, nandritra ny antoko, tsy te-ho tsara, araka izay mahafinaritra ny vehivavy tokan-tena mahalala. Ny olana dia izay, fara fahakeliny, tsara Tarehy ny Vehivavy foana no nandeha mihoatra ny vondrona ny vehivavy na ny lehilahy sy fotsiny grazed. Mety tena ho namana (raha manana ianao) na dia niresaka ny tsirairay ao amin’ny fomba tsotra sy afaka aho, Eny, izany fotsiny tsy miasa ka milaza Heim. Ary ny fomba tsara indrindra mba hamaly sy ny zavatra dia ny resaka? Inona no fomba tsara indrindra hamahana ny olana toy izany? Misaotra anao nilaza ny vahiny hafa ny mpiasa na ny fisintahana raha toa ka tsy miara-mbola, fa na inona na inona izany no, ny lamina efa ela no niala ny mizana. Ahoana no handeha ianao mba hanome. Betsaka loatra izany ho anareo, na izany amin’ny dingana manaraka. Satria mety misy zava-dehibe hafa aho miasa amin’ny mba hitsidika, na haka ahy. Izy no nanontany ahy raha toa aho ka afaka ny ho tonga an-trano avy niasa sy haka ahy. Fa satria aho vao nanomboka, izahay dia nanaiky handeha ny Volana mba haka Hastens. Ahoana no handeha ianao mba hanome. Efa lehibe fanontaniana ho an’ny olona rehetra, na inona na inona ny taona. Fantatro fa ny olona rehetra dia samy hafa, ary izany no mahatonga ahy manontany ho an’ny olona rehetra ny hevitry ny tena manokana. Ny olona rehetra mihaona mihoatra na latsaka tsara tarehy sy lava ny vehivavy fa izy no mahalala, fa ny mazava ho azy fa latsa-pitia amin’ny anankiray amin’ireo lava ny vehivavy rehetra tsy afaka manao izany koa. Ny fanontaniana hoe: inona ny vehivavy tokony ho izy, na toy ny inona ny vehivavy dia tokony hanana toetra ho anareo, dia lazao hoe: izaho dia manana sary an-tsaina ny fifandraisana aminy. Tsy midika na inona na inona izay misy ifandraisany amin’ny lafiny io, afa-tsy ny toetra amam-panahy.
Manana fahatsapana aho fa ny vehivavy rehetra izay tiany na tsy te, te-fifandraisana, sy ny hafa koa iray ihany no te-firaisana ara-nofo. Ary aiza no ahitana ny toy izany ny vehivavy. Tiako fotsiny toy ny fifandraisana ara-batana miaraka amin’ny vehivavy raha tsy misy firaisana ara-nofo hatrany. Mila kely fotsiny namihina sy nisangy. Izy dia milaza amiko fa izaho no tena fitiavana, fa indrisy fa tsy misy azo atao mba tsy handatsa-dranomaso toy izany. Inona no tombontsoa ho an’ny vehivavy eo amin’ny fifanakalozana line? Na aiza na aiza. Mino aho fa ny ankamaroan’ny vehivavy ny taona dia hahita izany toa tsy mankaleo, na avy amin’ny tena tanora ny taona, aoka ihany izany
← Hitsena ny ankizivavy iray any Alemaina Lahatsary
Finday Mampiaraka Ny Firaisana Ara-Nofo Daty? - Finday Mampiaraka Fampiharana →